आज असोज २२ गते (अक्टोबर ८) बिहिबारको राशिफल हेर्नुहोस्
October 8, 2020 1058
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) असजिलो परिश्थितिहरुलाई बुद्धिमता पुर्वक सहजतामा ढाल्न सकिनेछ । माया प्रेमको गाठो कसिलो हुनेछ भने जीवन साथिको सहयोगले उत्पादन मुल:क काम गर्न सकिनेछ । पा’रिवारि सभा समारोहका सहभागि भई मिठो मसिलो भोजन ग्रहण गर्न अवसर प्राप्त हुनेछ । कलाकारित तथा फिल्मी क्षेत्रमा समय लगानि गर्नेहरुलो नाम तथा दाम दुबै कमाउने ग्रह’योग रहेकोछ । कुटुम्बसँग कुनै पनि कारोबार गर्दा ध्यान दिनुहोला सामान्य मनमु’टाब सिर्जना हुनेछ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) सबैको सहयोग पाईने हुनाले काम गर्न जोस जागर आउँनेछ । सामाजि’क काममा दिन बित्ने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ । व्या’पार व्यावसायमा लगानि गरि मनग्गे धन संग्रह गर्न सकिनेछ । बिद्यार्थीहरुले मेहनेत गरि राम्रो नतिजा हात पार्न सक्नेछन् । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने परि’वार तथा आत्मिय मित्रमा साथ रमाई’लो यात्रा हुनेछ । भौतिक सम्पति तथा सवारि साधन प्रा’प्तिको योग रहेको छ ।
मिथुन(का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) खर्च भावमा गोचर गर्ने चन्द्रमाले स्वास्थ्यमा समस्या आई उप’चार तथा औषधि खर्च बढेर जानेछ । व्यापार व्यावसायमा लगानी गरेपनि आम्दानी कम हुनेछ । पढाई लेखाईमा समय दिन नसक्दा अरुभन्दा पछि परिनेछ । आफुभन्दा अग्र’जसँग राय बाजिने तथा मनमुटाब बढ्ने योग रहेकोछ । प्रेममा अबिश्वास तथा मनमुटा’ब बढ्नेछ । तरपनि यात्रा हुने योग रहेकोछ ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) नयाँ–नयाँ का’मको प्रस्ताब आउनेछ भने नोकरिमा पदोन्नति हुनेछ । बिभिन्न ठाउँबाट कामका प्रस्तावहरु आउनेछन् भने प्रसस्त रुपैया पैसा कमाउने योग रहेको छ । सत्रु तथा प्रतिश्’पर्धिहरु परास्त हुने’छन् भने बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा तपाईकै नाम अग्र स्थानमा आउनेछ । व्यापार व्याव’सायमा लगानि गरि भने जस्तो नाँफा क’माउँन सकिनेछ । भनेको समयमा सामाजिक कामहरु बन्ने हुनाले छोटो समयमा नाम तथा दाम कमाउँन सकिने हुँदा घर परि’वारमा खुसियालि छाउँनेछ ।
सिहं (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) चुनौतिहरुलाई किनारा लगाउदै कामहरु बनाउँन सकिनेछ भने राम्रा कामगर्दा समाजमा स्थापित हुँन सकिनेछ । व्यावसाय फस्टा’एरु जाने तथा व्यावसायिक या’त्रा हुनेछ । अध्ययनमा समय दिई आफ्नो बिद्यालार्ई निखार्ने सकिनेछ । आटेका तथा चाहे’का कामहरु गर्न सकिने तथा साथिभा’ईहरुको राम्रो सहयोग प्राप्त गर्न सकिनेछ । प्रेम तथा मित्रताको बन्धन कसि’लो हुनेछ भने घर परिवारमा तपाईको कामदेखि सबै प्रशन्न हुँनेछन् । सार्वजनिक पदमा बसेर सेवा प्रवाह गर्नेह’रुले तपाईको काम समयमा गरि’दिने हुनाले समय र रुपैया पैसाको बचत हुनेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) प्रशास’निक क्षेत्रमा तपाईको बर्चश्व रहनेछ भने सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने समय रहेकोछ । धार्मिक प्रतिष्ठान तथा मन्दिरति’रको यात्रा गरि टिका तथा प्रसाद ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । साथिभाई तथा आफन्तको सहयोगमा नयाँ योजना बनाई कार्यान्वयनको चरणमा लान सकिनेछ । खो’ज तथा अनुशन्धानको क्षेत्र’मा राम्रो प्रगति हुने योग रहेकोछ । लामो दुरिको शैक्षिक तथा धार्मिक यात्राको प्रवला सम्भावना रहेकोछ । भाग्यले साथ दिने हुँदा थोरै लगानिबाट पनि प्रशस्त रुपैया पैसा कमाउँन सकिने तथा आर्थि’क रुपमा सबल हुने ग्रहयोग रहेकोछ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) आफन्त तथा दिदिबहिनि सँग साना कु’रामा राय बाजिनेछ भने घमण्ड गर्ने बा’निले आफैलाई समस्या पार्नेछ । आर्थिक मुद्दाहरु हल हुनुको सट्टा थप जटिल बन्नेछ । बोलिमा रुखो’पना बढि आउने हु’दा आफन्त तथा साथिभाईहरु टाडिनेछन् । भौतिक सम्पति प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला नराम्रा घट्नाहरुको सा’मना गर्नु पर्नेछ । नसोचेको धन तथा सम्पति प्रयोग गर्न पाईने हुदा मन प्रशन्न रहनेछ । माया प्रेममा सामान्य मनमुटाब सिर्जना हुनेछ ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) बिभिन्न का’रणले कामहरु रोकिन सक्छ ध्यान दिनुहोला । व्यावसायमा भनेजस्तो आम्दानि नहुने तथा साझेदारि व्या’वसायमा लगानि गर्नेहरुले ध्यान दिनुहोला साझेदा’रहरु बिच मनमु’टाब सिर्जना हुनेछ । व्यावा’सायिक यात्रा हुने भएपनि बाटोमा दुख पाईने तथा अनाबस्यक ठाउमा खर्च हुनेछ । प्रेममा नचाहादा नचाहादै एक अर्का’बिच छुट्टिनु पर्दा मन खिन्न हुनेछ । अध्ययनमा मन नजादा अरुभन्दा पछि परिनेछ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) व्यापार व्याव’सायमा लगानि बढाएर प्रसस्त रुपैया पैसा कमाउन सकिनेछ । माया प्रेममा सामिप्य’ता बढ्ने तथा दाम्पत्य जीवन’को गाठो अझ मजबुत भएर जानेछ । मावलि पक्षबाट भनेज’स्तो सहयोग प्राप्त हुनेछ । लामो दुरिको अफिसियल यात्राको अधिक सम्’भावना रहेकोछ भने यात्राबाट भनेजस्तो उपलब्धि हात पर्ने ग्रहयोग रहेकोछ । वादबि’वाद तथा मुद्दा मामि’लामा प्रतिश्पर्धिहरुलाई हराउदै जित निकाल्न सकिनेछ । पढाइ लेखाइमा मन जाने हुनाले अरुभन्दा अग्र स्थानमा तपाईको नाम रहेनेछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) उपहार तथा चिठ्ठा प्राप्तिको प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ भने भौतिक सम्पति हरु लाभ हुनेछन् । शि:क्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानि बढाउदा मनग्गे धन कमा:उन सकिनेछ । घर परिवारमा नयाँ मानिसको आगमा’न हुनेछ भने स’न्तान तथा छोराछोरिको प्रगति देख्न पाईनेछ । व्यापार व्यावसायमा लगा’नि गर्दा प्रशस्त आम्दानि हुनेहुँदा दैनिक कामहरु सहज रुपमा हुनेछन् भने महत्वपुर्ण कामहरु सम्पादन हुनेछन् । मा’या प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने परिवारमा आत्मियत झल्कनेछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) आमा तथा आफन्तबाट भनेजस्तो सल्लाह तथा सुझाब पाईने हुनाले सुधारात्मक काम गर्न सहयोग हुनेछ । कृषि तथा पशुपा’लन व्यावसायबाट राम्रो आम्दानि हुनेछ । स’माजिक काममा समय दिनु पर्नेछ भने तपाईको काम देखि सबै खु’सि हुनेछन् । राज’नीति तथा समाजसेवामा समय लगानि गर्नेहरुले सर्बसाधार’णसँग सन्तुतिल व्यबहार गर्नुहोला काम बि’ग्रने हुँदा मान सम्मानमा कमि हुनेछ । सवारि साधनको व्यापार व्यवसाय सुरु गर्दा भने’जस्तो नाफा कमाउन सकिनेछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) नयाँ काम ग’रि मनग्गे धन तथा सम्प’ति जोड्न सकिनेछ भने उद्योग,व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । मापा प्रेमको डोरो कसि’लो भएर जानेछ भने पति पत्निबिच एक अर्कालाई बिश्वास गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ । आट,पराक्रम गर्न नडाराई अगाडि बढ्ने हो भने चाहेको गन्तब्यमा पुग्न सकिनेछ । वि’वाद तथा हुलमुलका बिच पनि राम्रा तथा परिणाम मुखि काम गर्न सकिनेछ ।
Prevविशेष के छ त यो भिडियोमा ? जुन भिडीयो ७० लाख बढीले हेरे ! (उक्त भिडीयो हेर्नुहोस्)
Nextआफ्नी बुढी हजुरआमालाई
लाहुरे राहुल र स्मिताको बारेमा शिशिर भण्डारीले रुदै यस्तो भने, सबैलाई रुवायो (भिडियो सहित)
नेपालमा आज संक्रमितको नयाँ रेकर्ड, एकदिनमा यती धेरै संक्रमित थपिए, हेर्नुहोस्